Ny lahatsoratr'i Senraj Soundar ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Senraj Soundar
Taorian'ny naha Tompondakan'i Jeopardy an'i Watson dia niara-niasa tamin'ny Cleveland Clinic i IBM mba hanampiana ireo mpitsabo hanafaingana sy hanatsara ny taham-pahalalan'ny diagnostika sy ny taratasiny. Amin'ity tranga ity dia mampitombo ny fahaizan'ny dokotera i Watson. Raha izany, raha afaka manampy amin'ny fitsaboana ny solosaina, dia azo antoka fa toa afaka nanampy sy nanatsara ny fahaizan'ny mpivarotra koa ny solosaina. Saingy, hanolo ny mpiasa am-barotra ve ny solosaina? Mpampianatra, mpamily, mpiasan'ny dia ary